Budata Ball Tower APK maka Android
Budata Ball Tower
Free Budata maka Android (79.00 MB)
Budata Ball Tower,
Ball Tower bụ egwuregwu mkpanaka na-eri ahụ nke chọrọ nlebara anya, ndidi yana nka, ebe anyị na-agbalị idobe bọọlụ na-ada nelu ikpo okwu ogologo oge enwere ike.
Nicheta egwuregwu ịma aka nke Ketchapp nwere ihe ngosi dị mfe, anyị na-agbalị ichekwa bọọlụ ahụ dara nelu ụlọ elu ahụ. Nezie, ọ dịghị mfe idobe bọl ahụ, nke na-amalite ịtụgharị ma na-amụba ọsọ ya na obere aka anyị na-eme mgbe anyị nọ nelu ụlọ elu, nelu ikpo okwu. Ọ bụ ezie na naanị ihe anyị na-eme ka bọl na-aga nihu bụ inye ntụziaka, nhazi nke ikpo okwu na-eme ka ọrụ anyị sie ike.
Na egwuregwu, nke nwere ike na-egwuri sequentially na telivishọn yana gam akporo ngwaọrụ, o zuru ezu imetụ ọ bụla nókè nke ihuenyo otu ugboro ịgbanwe ntụziaka nke bọl. Ebe ọ bụ na bọọlụ na-agba ọsọ nonwe ya, naanị anyị na-enye ntụzịaka dịka ngọngọ ndị na-esote.
Ball Tower Ụdịdị
Nha faịlụ: 79.00 MB